Faah-faahino kasoo baxaya qaraxyo ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha (Sawiro) – Xeernews24
3. Januar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
January 2 (XeerNews24)
Labo qarax oo waaweyn ayaa goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo qaraxyadan ay ka dhaceen meel ku dhow garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane ee sida weyn loo ilaaliyo.
Qaraxyada oo loo adeegsaday gaadhi laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa sheegaya in waxyeelada ugu badan ay soo gaadhay ciidamadda ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa sidoo kale la sheegayaa inay waxyeelo kasoo gaadhay qaraxyada maanta dhacay.
Qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ah kii ugu horeeyay sanadkan cusub 2017, hase yeeshee 26kii bishii July ee sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa qarax ka dhashay gaadhi waxyaalaha qarxa lagu soo raray uu ka dhacay meel ku dhow albaabka xerada Xalane.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/qarax-6-1.jpg 360 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-03 01:16:302017-01-03 01:16:30Faah-faahino kasoo baxaya qaraxyo ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha (Sawiro)
Muuqaal ay duubtay Karamadda Qarsoon Qaraxi ka dhacay Istaanbul Lixdii Goobood oo Wali daan-daansigii ku socdo iyo beeshi ciise oo ogolaatay...